Orinasa sy mpanamboatra China Usb-C hub-CH07A | Vondrona Brocade
Telo USB 3.0 seranan-tsambo famindrana data haingana hatramin'ny 5Gbps, SD / TF mpamaky karatra manome hafainganam-pandeha hatramin'ny 90MB / s, haingana kokoa noho ny ankamaroan'ny mpamaky karatra eny an-tsena. Ahitohy ny serananao amin'ny seranana HDMI mankany HDTV, monitor na projector. Tohano ny fivoahan'ny HDMI hatramin'ny fanapahan-kevitra 4K UHD (3840x2160 @ 30Hz)
Isaky ny fanaterana fampidirana
Ny kalitaon'ny vokatra USB C anay dia mitovy amin'ny kalitaon'ny OEM, satria ny ampahany ifotony dia mitovy amin'ny mpamatsy OEM. Ny vokatra USB C dia nandalo fanamarinana matihanina, ary tsy vitan'ny hoe afaka mamokatra vokatra manara-penitra OEM isika fa manaiky ihany koa ny baiko namboarina.
Miaraka amin'ny vokatra USB C kilasy voalohany, serivisy tena tsara, fandefasana haingana ary ny vidiny tsara indrindra, nahazo fandresena fatratra izahay mpanjifa vahiny. Ny vokatra USB C anay dia naondrana tany Afrika, Moyen Orient, Azia atsimo atsinanana ary faritra hafa
Manome vokatra tsara, tolotra tena tsara, vidiny mifaninana ary fandefasana haingana. Ny vokatray dia amidy tsara na amin'ny tsena anatiny na ivelany. Brocade dia miezaka ny ho mpamatsy iray lehibe ao Shina.
Previous: Usb-C hub-CH06B
Manaraka: Usb-C hub-CH08A
2 * USB3.0 Hatramin'ny 5Gbps
1 * slot SD Mahatratra 90MB / s
TF slots Mahatratra 90MB / s
Fanaterana herinaratra 20V / 3A Max 60W
Color Space Grey / Green / Accept Customization
lafiny 123 * 55 * 16 mm
Dimension （miaraka amina fonosana） 145 * 80 * 23 mm
Milanja （miaraka amina fonosana） 120 g
Sample maimaim-poana mandoa santionany